ThiEYE UGqirha X RC uphononongo-1080P kunye nokurekhodwa kwe-FPV nge- € 70 | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo ThiEYE UGqr X RC, idrone erekhoda kwi-1080P ye- € 70
UMiguel Gaton | | elektroniki, Reviews
Ukuthatha ithuba lokuba iKrisimesi isondele, siza kuthi Hlaziya idrone eyenye yeemveliso ezijolise ekubeni yinkwenkwezi yezipho zale mihla kunye nezinye iimveliso ezinje izithuthuthu zombane ezikwabangela ukungangqinelani. Ngeli xesha imveliso eza kuhlalutywa yile I-minidrone ye-ThiEYE uGqirha X RC, isixhobo esijolise kubasebenzisi abafuna ukukwenza qalisa ukuziqhelanisa nolingo lomntu wokuqala (Umbono woMntu wokuqala, owaziwa ngcono sisibizo sayo i-FPV) ngaphandle kokutyala iindleko eziphezulu. I-ThiEYE uGqr X yimveliso eyomeleleyo, ekulula ukuyiphatha kwaye onokuyifumana ngaphezulu nje kwe- € 70 ngokunqakraza apha.
1 Uyilo olulungileyo kunye nezixhobo
2 Inqwelomoya ngeApp
3 Ikhamera yeDrone
4 Imixholo yebhokisi, ixabiso kunye nokufumaneka
5 Amanqaku afanelekileyo
6 Amanqaku ngokuchasene
Into yokuqala etsala umdla wale drone ngaphandle kwebhokisi yile ubukhulu bayo obuncinci kunye nokukhanya. Le yidrone yokulinganisa i-11.00 x 11.00 x 4.30 iisentimitha kunye nobunzima be-85 gram, iyenza ukuba ilungele ukuyihambisa nakweyiphi na ubhaka omncinci ngaphandle kokuthatha indawo enkulu. Izinto zokuvelisa i-drone yiplastikhi kwaye uyilo lwayo luyinto yoqobo, inentloko enamehlo amabini ngaphakathi iluhlaza okwesibhakabhaka i-LED eyinika umnxeba okhethekileyo.
Iipropelerha zohlobo lwebrashi, iza ixhotyisiwe kukhuseleko lokuzikhusela ukuthintela nayiphi na ingozi ekonakaliseni iincakuba. Njengomdla onomdla, isixhobo ayibonelelwa ngalo naluphi na uhlobo lwezixhobo zokufika ke siza kuhlala ngqo nesisu, into ebonakala iyingozi kum ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba iqhosha lokucima / lokucima lesixhobo libekwe ezantsi kwedrone kunye isivamvo enombala - barometric ukulinganisa ukuphakama efikelela kuko ngexesha lokubhabha, ke siyakucebisa ukuba uphephe ukugqabhuka kokuphazima okukhulu njengoko kunokonakala.
Ikwanayo ne I-3-axis gyroscope kunye ne-3-axis accelerometer oko kuyakuvumela izixhobo ukuba zizinziswe ngokufanelekileyo ngexesha lokubhabha.
U-ThiEYE uGqirha X RC akanalo ulawulo olukude ke konke ukuhamba ngenqwelo moya kwenziwa ngeapp iyafumaneka nge-IOs kunye ne-Android oya kuyifaka kwi-smartphone yakho. Ukusetyenziswa kwayo kulula, kufuneka nje sifake usetyenziso kwiselfowuni yakho, vula idrone usebenzisa iqhosha elikhoyo emazantsi alo, linda imizuzwana embalwa ukuze inkqubo iqale I-WiFi 2.4 GHz kwaye uqhagamshele i-smartphone yakho kwinethiwekhi yeWifi eya kuvela ngegama le-drone.
Nje ukuba kwenziwe oku, sivule usetyenziso, yiya kwimowudi yendiza kwaye singathatha kwaye siqale ukuvavanya i-drone yethu entsha. Ukuhamba ngenqwelomoya kulula, mhlawumbi kuyacotha kodwa kungcono kwimveliso yolu hlobo ejolise kubaqhubi beenqwelo moya zokuqala. Ikuvumela ukuba uqwalasele izinto ezininzi ezinje ngokubhabha ngenduku yokudlala okanye ngokusebenzisa i-gyroscope ye-smartphone, amanqanaba amabini ahlukeneyo esantya, ukubhabha kwimowudi yesiqhelo okanye inqwelomoya, ulawulo lwesitayile saseMelika (esisebenzisa yona eYurophu) okanye ngesimbo IsiJapan, njl. Ikwanayo neqhosha lokulinganisa, elinye lokwenza ifayile ye ukucotha ukujikeleza okungu-360º okuvumela ukutshintsha icala lesixhobo kunye neyokugqibela yokuhamba ngokukhawuleza kunye nokufika.
La Idrone ibhetri yi-650 mAh okuthetha ukuba ixesha lokubhabha elimalunga nemizuzu esi-8 ngokupheleleyo, okuqhelekileyo kolu hlobo lwenqwelomoya. Ixesha lokutshaja ziiyure ezi-2, ke ukuba ulisebenzisa kakhulu, sicebisa ukuba uthenge ibhetri yesibini eza kukuvumela ukuba wonwabe ngakumbi ukubhabha. Kwimeko yokuphelelwa yibhetri ngexesha lokubhabha akukho bungozi bengozi, kuba idrone iyayifumana kwaye yehle ngokukhawuleza ukuze ifike kwindawo elawulwayo nengena ngozi.
Irediyasi yokubhabha ziimitha ezingama-50 kwaye ifikelela kubude obufikelela kwiimitha ezingama-20. Sivavanye nge-iPhone X kwaye asikhange sibe nalo naluphi na uhlobo lomqondiso osikiweyo kuvavanyo lonke; Isebenza kakuhle kwaye inika ingqalelo ngakumbi ukuba iyimveliso ebiza kakhulu.
Oku enye yamandla e-ThiEYE uGqirha X RC Drone kuba ibandakanya Inzwa ye-8 MP uyakwazi ukuthatha iifoto ezisemgangathweni. Kwicandelo levidiyo, isixhobo sinakho ukurekhoda nge- Isisombululo esipheleleyo se-HD kwii-30 fps.
Imixholo yebhokisi, ixabiso kunye nokufumaneka
Kwibhokisi yethu ye-ThiEYE uGqirha X RC drone kuza idrone uqobo, izikhuseli ezibini zokuhambisa, ezine zokuhambisa, ibhetri eyi-650 mAh, intambo encinci ye-USB yokutshaja, isixhobo sokususa nokubeka izixhobo kunye nencwadana yomsebenzisi ngeSpanish, into esoloko ixabiseka kolu hlobo lwemveliso.
El Ixabiso langoku le-ThiEYE uGqirha X RC yi-71 €. Kukuthengwa okucetyiswayo ukuba ujonga isixhobo esinexabiso elifikelelekayo, imilinganiselo emincinci kwaye ekuvumela ukuba uchithe iiyure ezimbalwa zokubhabha kamnandi.
Ibhetri iphantsi kancinci
Awunakho ukhetho lomyalelo
Yiyo uGqirha X RC
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Uhlalutyo ThiEYE UGqr X RC, idrone erekhoda kwi-1080P ye- € 70
Sihlalutya ikhamera yeXiaomi Yi 4K + kunye nokubalulwa kwayo kwentliziyo [VIDEO]
Eyona dFlow ijongene neLwesihlanu omnyama